Azia Atsimo: Mifanakalo resaka ny olan’ny rano ireo mpitoraka blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2010 16:24 GMT
Vakio amin'ny teny မြန်မာ, русский, Deutsch, Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, English
Blog Action Day dia hetsika fanao isan-taona isaky ny 15 Oktobra izay iarahan'ny mpitoraka blaogy manerantany manoratra mikasika olana iray iraisana amin'ny andro iray mitovy. Tamin'ity taona ity dia ny “rano” no foto-kevitra. Maromaro ihany koa ireo mpitoraka blaogy avy any Azia Atsimo no nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Ndeha hojerena izay nosoratan'ny saany amin'izy ireo.
Sinin-drano milahatra hofenoina tao Mamallapuram, India. Sary avy amin'ny pejy Flickr an'i mckaysavage. CC BY
Manoratra Ishrath ao amin'ny Wandering Mist :
Tsy araka ny eritreretina ny rano any India. Sady fitahiana no ozona izy manomboka any avaratra ka hatrany atsimon'ny firenena. Any avaratr'i India no teraka ny rano. Ny any ataimon'i India miady amin'ireo renirano mikoriana ao. Ny Avaratra-Andrefan'i India dia tany efitra tsy misy rano. Ary ny atsinanan'i India kosa manana ny rotsak'orana avo indrindra izay tsy manampy na iza na iza.
Ary ambonin'izany, ao anatin'ny ozon'ny rano any India ny fanapoizinana, tsy fahampiana, fandàvana, fanaovana risoriso, olan'ny fitaterana, fahazoana izany, fahafatesana sy aretina, fahalotoana, ny foroboroboan'ireo orinasa tsy mahatsiaro ny andraikiny nefa miankin-doha amin'ny rano, sy ny maro tsy voatanisa. [..]
Adinontsika ireo fomba fiainantsika tamim-pahaizana izay nampiasàna fa tsy norobarobàna tamin'ireo loharano natoraly tahaka ny rano. Tsy nisy fidiovana tsy manam-petra izany, famanàn-drano, fetin'ny orana, na siniben-drano mba hahazoana toky fa hitohy hikoriana ny rano mandritra ny fotoana fidiovana. Notsinjaraina araka ny fampiasàna azy ny rano. Tsy nisy izany fiheverana famatsian-drano 24ora/7andro izany any amin'ireo faritra izay tsy maintsy nandavahan'ny isam-pianakaviana ny anjara taniny [Avy amin'ny mpandika: manao lava-drano]. Miaraka amin'ny fahaizana amam-pahalalàna ary ny fandraisana andraikitra, dia ovàntsika ho helo hatrany ny tany iainantsika,.
Manome torolàlana 25 hitahirizana rano i Aastha Kukreti ao amin'ny Delhi Greens. Mampahafantatra i Abha Midha :
Ao India, nitarika fiovàna ara-tsosialy ny Hetsika Sulabh teo amin'ny sehatry ny fahadiovana. i Dr Bindeshwar Pathak no nanomboka azy, mora vidy ny toeram-pivoahana Sulabh ary vahaolana mitsinjo sy manaja ny tontolo iainana ho an'ny olona.
Toeram-pantsakàna rano any Patan Nepal. Sary avy amin'ny pejy Flickr an'i Wayan Vota. CC BY-NC
Manazava ny olana momba ny rano any Nepal i Bhumika Ghimire:
Mifandraika mivantana amin'ny fahasimbàn'ny tontolo iainana any Nepal ny olan'ny rano. Any Kathmandu renivohitra, faritra maro no tsy mahazo rano 6 andro isan-kerinandro, ka voatery, na mividy rano amin'ireo mpivarotra, na mionona amin'ireo lava-drano sy renirano izay tsy voaara-maso ny hadion'ny rano ao aminy.
Namoaka sary mampiseho ny fifandraisan'ny rano amin'ny fiainantsika andavan'andro, i Ujjwal Acharya.
Na dia niharitra ny tondra-drano ratsy indrindra tao anatin'ny zato taona aza i Pakistan, maina ary miha-karankaina ny faritra sasany ao aminy. Manamarika i Khalida Brohi, ankizivavy teratany avy any Balochistan any Pakistan fa ireo olona teratany foana no voadona mafy indrindra amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro:
Niova tsikelikely izao ny fombam-piaina nentin-drazana Balochistan sy ny fampiasàna ny tany ho fambolena. Miova ireo fomba fambolena roa Khushkaba sy Sailaba, tsy mety ny fanao mahazatra manisy tatatra hampiasàna ny rano tamin'ny tondra-drano ho an'ny tany fambolena satria niova làlana ny rano tondraka, sady izao na ny fahaizana ambony indrindra aza tsy afaka mamantatra hoe aiza no hisy tondra-drano, raha fitahiana ho an'ireo mponin'ny lemaka any Baluchistan ny tendrombohitra taloha, lasa loza manimba kosa izany ankehitriny.
Lava-dranon'i Marvi any an-tanànan'i Tharparkar, tany efitra any Sindh. Sary avy amin'ny pejy Flickr an'i Kashif. CC BY
Jalal HB, ao amin'ny Fire Within, dia manoratra momba ny tsy fahampian-drano madio any amin'ny tany efitr'i Thar any amin'ny faritr'i Sindh:
Rehefa avy ny orana dia angonina anaty fitoeran-drano somary iva, somary boribory antsoina hoe “tobas” ary miara-misotro eo ny olombelona sy ny biby. Tsy misy hevitra ankoatr'izay satria tsy azo atao koa ny mandàvaka. Na dia misy aza ny fahombiazana, malanilany sy masira loatra ilay rano ka tsy afaka hosotroina amin'izao fotsiny.